Uxakene nobomi kunye neziyobisi umzali | News24
UNtombizanele Jordan ongumzali wonyana otya iziyobisi eme phambi kwefestile eyophulwa ngulonyana wakhe ngelitye.PHOTO: mzwanele mkalipi
Ukhala isimbonono umama wetyendyana laseHarare, ngelithi uphelelwe ngamatyholo ngenxa yezenzo ezigwenxa ezenziwa ngumntwana wakhe, neziphembelelwa ziziyobisi.
Kungokunje umemelela eluntwini ukuba lungenelele.
Lo mama, uNtombizanele Jordan ulilisela ngelithi uxakene nobomi ngenxa yonyana wakhe uSibabaliwe, ominyaka ingama 23. Utyhola ngelithi le ndedeba iphila impilo yeziyobisi, ntoleyo ibangela ukuba ibe luhlupho kusapho. Kutyholwa ngelithi uqatsele ekuthatheni izinto zabanye abantu ukuze afezekise umkhwa wakhe weziyobisi.
U-Jordan uhambisa athi ngenxa yale meko wagqiba ekubeni ayikhabele ngaphandle kwamasango omzi wakhe le dyongwana. Ukanti eli nyathelo libonakala lingenamiphumela incomekayo.
U-Jordan utyhola ngelithi unyana wakhe kuyabonakala ukuba kudala wazitya iziyobisi, nakholelwa ekubeni sezamcutha nengqondo.
Lo mzali uthi unyana wakhe sele esuka kumaziko ohlukeneyo anceda abantu abanengxaki nokusebenzisa iziyobisi, kodwa akukho lutshintsho lubonakalayo.
“Ndihlala nabazukulwana bam apha endlini, andikwazi nokuphuma phandle, yaye kufuneka kusoloko kukho umntu apha endlini ngoba ngomzuzu nje ndingekho uyamosha,” utshilo uJordan.
Uqhube wathi le meko ayimphethanga kakuhle emphefumlweni. “Uyabetha xa isukile lento yakhe, ndingazi noba sukube etshaye kakhulu. Kuliwa apha kube lidabi xa esilwa naba baphambi kwakhe. Abantwana aza emva kwabo bandishiyile apha endlini bathi mandihlale nomntana wam,” utyatyadule watsho uJordan.
“Andisenanto mna apha endlini ngoba iDVD kunye neembiza wazithengisa. Xa ethe wafumana elothuba apha uyathutha kwanto, kodwa lo mntu usajonge into etyiwayo kwalapha kum. Umabonakude yena zange ndanaye ngoba ndiyayazi angamka apha ndibe ndiyazisokolisa nje,” utshilo uJordan.
U-Jordan, nosebenza njengomntu onyangayo, uhambise wathi wamane eqaphela ukuba ulahlekelwa yimali endlini, kanti lonke eli xesha ithathwa ngunyana wakhe.
“Ndithe ngenye imini ndimthuma emrhawulweni athathe imali ndizokuthenga umbane. Xa ebuya undixelela ukuba kukho iR50 ndibe ndisithi asoze ngoba ndiyayazi imali yam ibipha. Ndimane ndizibuza yenzeka njani yonke lento kanti lonke eli xesha ithathwa nguye. Yavela ukuba le mali ithathwa nguye ngosuke ndimdudle ndimbethe ukuze ayichaze,” utshilo uJordan.
Uhambise wathi lo mkhwa wawuqala esengumfundi kwisikolo samabanga aphantsi, kwaye uthe xa emngcambazisa wafumanisa ukuba waqala eneminyaka eli 10 ukutshaya.
U-Jordan uthi umnxeba anawo ngoku ngowe 14. Yonke iminxeba yakhe iphelela kulo mntwana. “Uyazithatha iifowuni zam ayozithengisa kwezi khonteyina zingasesitishini, eKhayelitsha. Xa ethe wayithatha uyakwazi ukuduka noba ziintsuku zintathu abuye sele elambile. Xa ndimbuza ngefowuni yam atsho athi uyithengisile endaweni ethile, ndiye ndiyoyikhangela ngamanye amaxesha ndiyifumane ngelinye ixesha bayiphike,” utsho uJordan ekhankanya nento yokuba imicrowave anayo endlini yeyesine. Ukanti ezangaphambili zathathwa kwa ngulomntwana.
U-Jordan uthi owona mnqweno wakhe kukuba le ndodana iye kuhlala kwiziko elinceda abantu abanengxaki neziyobisi, agcinwe khona iiminyaka.
“Andifuni aye endaweni azakubuya kwangoku kuyo. Ndifuna ahlale pha iiminyaka kude kwehle eli gwebu nam ndinalo ngenxa yakhe. Ingxaki yabantwana bethu zitshomi nezibangela bazibone sele beyele kunzima nokuphuma kwezi zinto bazityayo zibabulalayo,” utsho uJordan.
Uhambise wathi imeko akuyo imxakile naye, ngoku sele ethandazela ukuba kuvele nje uncedo ukuze unyana wakhe azikhwebule kwezi ziyobisi. “Andiyazi nam ndifuna icebo. Ndithe xa ndijonga kwiCity Vision kuba ndifuna uncebo ndathi mhlawumbi ndingancedakala. Nam ndixakiwe mpela ngulo mntana ngoba kuye inye into kukutshaya qha enye nenye akayikhathelelanga kwaphela,” uthethe wenje-njalo lomzali.
Uqhube wathi uye aphumle kakhulu xa unyana wakhe engekho, mhlawumbi egwetyiwe noba zezonyanga zintathu okanye ezintandathu entolongweni.
Uthi ubomi buye bubengcono kakhulu nangona athi lo nyana wakhe akubuya aphinde abuyele kundalashe wokuphila imeko emaxongo.
U-Jordan utyhole ngelithi unyana wakhe akafuni nokuphangela sele ebiziwe ezindaweni zesingxungxo.
Uthi sele emvusa uyaqhankqalaza, athi malivalwe ucango lwendlu yakhe, kwaye kuyabanda kuba engafuni ukuphangela.
U-Jordan ukwatyhole amapolisa aseHarare ngokusilela ekubambeni le ndedeba ngamatyala okonakalisa izinto zendlu yakhe.
Umphathi wesikhululo samapolisa aseHarare u-Col Joseph Raboliba uzibhebhethile ezi zityholo. Uthe le ndedeba yabanjwa kuwo onke amatyala awayevulelwe yona ngunina.“Kumatyala amathathu athi arhoxiswa yinkundla. Kwelinye ityala wafunyaniswa enetyala waze wagwetya intsuku ezingamashumi alithoba entolongweni okanye abhatale umdliwo wama R4 800,” utshilo uRaboliba.
Uthe kwityala lokugqibela lo nyana analo waye wabanjwa kusalindelwe liqhubekeke enkundleni.
Gugulethu academy donates food to the local community